Sida loo Beddelaan FLV in Lugood Library
itune kaliya taageeraa MP4, MOV iyo qaabab M4V. Haddii aad ku garaacay madaxa aad ayay derbigii kula isku dayaya inaad ogaato sidaad u heli lahayd flash (flv) videos gal Lugood aad, joojin! Waxaad ku socoto inaad isku aragto madax xanuun! Taasi waa sababtoo ah FLV ma aha qaab video Lugood taageerto. Waxaad si toos ah ma dajiyaan karaa files FLV, kuwaas oo si Lugood. Si kastaba ha ahaatee, sida inta badan dadka dhawaan lahayd inaad u badan oo FLV files soo bixi qaar ka mid ah website-yada si fiican u yaqaan sida YouTube. Oo waxaa macquul weyn oo ah in aad rabto in aad saaray FLV in Lugood si ay u maareeyaan ama u hagaagsan in iPhone, iPad iwm Xaaladdan, waxaad leedahay si ay u qabtaan FLV in ay diinta ka Lugood.
Si loogu badalo FLV in Lugood, a video Converter FLV in Lugood noqon doonaa doorashada ugu fiican ee aad u. Ka dibna waxaad si fudud ku dari kartaa files FLV si aad u Lugood.
Qeybta 1: Hel Best & Professional FLV in ay Lugood Converter
Qeybta 2: FLV Free in Lugood Converter
Qeybta 3: FLV Online in Lugood Converter
Professional video Converter: Waxaad u isticmaali kartaa in ku dhowaad dhammaan faylasha aad loogu badalo in ay Lugood, oo ay ku jiraan FLV, MKV, Divx, Xvid, M4V iyo in ka badan.
Video tayada Best: Marna ma u baahan doontid inaad ka wel ku saabsan tayada wax soo saarka video ah. Waxaa diinta caadi ah, 3D iyo HD videos khasaara AAN tayo leh.
Xawaare sida dhaqsaha badan: The xawaaraha diinta 30X ugu dhaqsaha badan ka dhigaysa in ay u istaagaan soo baxay oo dhan ee u tartameen.
Xoog video editor: Waxaad u isticmaali kartaa si aad xaalkaa videos la video qalabka dhisay-in tafatirka in ay jar, dalagga, shaandheyn aad video.
Advanced DVD gubi: Waxay kaa caawinaysaa in aad DVD xirfadle by video gubanaya si DVD la arrimo badan oo menu.
Hadda, kaliya ee i raaca in aad ku darto files FLV si aad u talaabo Lugood talaabo. Ka hor inta in, waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo iyo rakibi this FLV smart in Converter Lugood hore.
Sida loo badalo FLV in Lugood
1. Ku dar files FLV in FLV in ay Converter Lugood
App Tani gebi ahaanba bixisaa saddex siyaabood oo kala duwan si ay u dar files FLV. Double guji icon miiska si uu ugu tartamo app this, ka dibna mid ka mid ah hababka soo socda u isticmaalaan in ay ku shuban files.
In menu ugu weyn, guji "File" ka dibna dooran "Add Files" doorasho. Wakhtigan, aad dajiyaan kartaa videos FLV deegaanka ka kombiyuutarka in barnaamijkan.
Hit ah button xitaa computer iyo dajiyaan aad doonayay files FLV.
Si fudud u jiidi oo hoos u files FLV barnaamijkan.
App Tani waxay bixisaa badan oo qaabab video caan ah oo ka hor-goobaha loogu talagalay dhammaan aaladaha Apple. Waxaad dooran kartaa qaab Lugood taageerto video sida M4V ama wax kasta oo ka mid filaayo in pre-goob sida qaab wax soo saarka.
In hoose ee interface ah, riix "Qaabka Output" badhanka si ay u doortaan M4V liiska Profile hoos-hoos. Haddii kale, waxaad dooran kartaa mid ka mid idinka mid ah oo doonayay Apple model qalab ka "Apple" category liiska Profile hoos-hoos.
3. U beddelaan FLV in Lugood
In tallaabadaas, kaliya aad u baahan tahay si ay wax miiran ah "Beddelaan" button on geeska midig ugu hooseysa interface this app ee. Bal eeg, app tani waxaa diinta FLV in qaab Lugood ah socon hadda. Waxaad ka arki kartaa boqolkiiba dhamaystirka iyo wakhtiga idiin hadhay oo.
Ka dib markii convering faylka, kaliya riix "Folder Open" doorasho si aad u hesho files wax soo saarka, ka dibna si toos ah kuwaa oo maktabadda Lugood aad ka dib markii socda codsiga Lugood.
Video Tutorial: Sida loo Isticmaalo FLV in ay Lugood Converter
# 1. FLV Free in Lugood Converter: Wondershare Video Converter Free
Waa FLV dhammaystiran oo lacag la'aan ah si ay u Lugood video Converter ay la socoto lacag dheeraad ah ma. Waxaad isticmaali kartaa bilaash ah Lugood video Converter si loogu badalo wax video in Lugood qaabab socon, xaalkaa videos leh shaqada classic video tafatirka, oo kala soo bixi videos ka goobo badan oo video qaybsiga.
Pro: dhamaystiran FLV si xor ah u Lugood video Converter, oo isu video diinta qalab
1.There waa presets ma laguu siiyey in aad doorato sida qaabab video saarka.
2.Beerta tayada wax soo saarka video laga yaabo in hoos, halka Video Converter Ultimate badasha video tayo waayi maayo.
3. In la eego video gubanaya si DVD, laguuma ogola in la isticmaalo funtion la version xorta ah.
Sida loo Beddelaan MPEG in MP4 ee Mac OS X Libaaxa / Windows
> Resource > Beddelaan > Sida loo soo dejinta FLV in Lugood